एमसीसीबारे हामीले कुनै धारणा बनाएका छैनौं : डा. भट्टराई | Hitkhabar
September 12, 2021 September 12, 2021 Hitkhabar0Comments
भदौ २७, २०७८ । नेकपा (एमाले) का विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले आफ्नो पार्टीले एमसीसीबारे अहिले कुनै पोजिसन नबनाएको स्पष्ट पारेका छन् । सत्तासिन दलहरुले धारणा बनाएपछि आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने उनको भनाई छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्र्ममा बोल्दै डा. भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘हाम्रो पार्टीले अहिले एमसीसीको बारेमा कुनै धारणा बनाएको छैन् एमसीसीको बारेमा वर्तमान सरकारले के गर्दैछ भन्नेबारे औपचारिक जानकारी छैन् । सरकारले एमसीसी ल्याउन खोजेको हो कि होईन ? सरकारले उपाध्यक्षसँग के कुरा गर्यो ? हिजो एउटा धारणा बनाएका सत्तासिन दलमा एउटा धारणा छ, हिजोकै मत छ कि अर्को मत छ ? सत्तासिन दलमा के छ भन्नेबारे हामी बेखबर र्छौं । हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षी दलको हो ।’
डा. भट्टराईले एमसीसी पारित गराउनको सरकारलाई आफूहरुको आवश्यकत्ता नै नपरेको पनि सुनाए । उनले भने,‘एमसीसी पास गर्नको लागि हाम्रो आवश्यकत्ता रहन्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारलाई लागिरहेको छैन् । सरकारसँग बहुमत छ । एमसीसी पास गर्न जम्मा १३६ मत भए पुग्छ । पारित गर्नको लागि त सामान्य बहुमत भए पुग्छ । सरकारसँग २९ मत बढि छ । सरकारसँग अहिले कम्फर्टेबल अवस्था छ । तर, सरकारले हामीसँग अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै छलफल गरेको छैन्, हाम्रो तर्फबाट हामीसँग किन कन्सल्ट गरिएन भन्ने पनि छैन् ।’
उनले एमसीसीबारे एमालेको अहिले पोजिसन तय नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म कुनै कुरा नआएकोले हामीले औपचारिक धारणा बनाएका छैनौं ।’
← एमसीसी पारित भए देशको अखण्डतामाथि प्रहार
अल्का अस्पतालमा हिमीआर्थोप्लाष्टिको सफल शल्यक्रिया →
काँग्रेस भद्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा: प्रवक्ता शर्मा
June 2, 2018 Hitkhabar 0
January 8, 2019 Hitkhabar 0